ဖူးစာရေစက်ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်လို့ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်စီ လျှောက်လှမ်းကြတော့မဲ့ Zhao Liying နဲ့ Feng Shaofeng | News Bar Myanmar
ဖူးစာရေစက်ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်လို့ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်စီ လျှောက်လှမ်းကြတော့မဲ့ Zhao Liying နဲ့ Feng Shaofeng
မင်္ဂလာဆောင်ပြီး နှစ်ဦးရဲ့မေတ္တာတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုကတော့ နှစ်နှစ်အကြာမှာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ တရုတ်အနုပညာနယ်ပယ်ရဲ့ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်စုံတွဲ Zanilia Zhao Liying နဲ့ William Feng Shaofeng တို့ဟာ ကွာရှင်းပြတ်စဲကြောင်းကို April လ ၂၄ ရက်နေ့မှာပဲ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းဟာဆိုရင် ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်ကာ လူအတော်အများကို အံ့သြသွားစေခဲ့ပြီး သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အများအပြားဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့ The Monkey King3မှာ အတူတူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြ အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြပြီး ထိုစဥ်တုန်းက Zhao Liying ကို Feng Shaofeng ရဲ့ အိမ်ရာမှာ မကြာခဏတွေ့ဆုံခဲ့တာကြောင့် တွဲနေကြသလားဆိုပြီး ကောလဟာလတွေထွက်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း နှစ်ယောက်စလုံးက အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တာကြောင့် သူတို့ရဲ့ပတ်သက်မှုကို ငြင်းဆန်ခဲ့ကြတာပါ။
၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာတော့ Zhao Liying ကို ကလေးတွန်းလှည်းနဲ့အတူ တွေ့ခဲ့ရပြီး တစ်လအကြာမှာပဲ သူတို့နှစ်​ယောက်က လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ Zhao Liying ရဲ့ ထင်မှတ်မထားတဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိလာမှုကြောင့် အလျင်အမြန်ပဲလက်ထပ်လိုက်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ဒါ့အပြင် Zhao Liying နဲ့ Feng Shaofeng ကလည်း သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့သားဦးလေးကို လွန်စွာမှာချစ်တာကြောင့် နှစ်ယောက်စလုံးဟာ မိသားစုဘဝတစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ လိုလားပြီးအသင့်ဖြစ်နေကြောင်း မှတတ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။
၂၀၁၉ ရောက်လာတော့ Feng Shaofeng ဟာ နောက်ကွယ်မှာဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေထွက်လာခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ မင်းသားကတော့ အဆိုပါကောလဟာလတွေကို ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး မဟုတ်မမှန်သတင်းတွေကိုဖြန့်ခြင်း၊ Social Media မှာ တင်ခြင်းတွေပြုလုပ်ပါက တရားဥပဒေနဲ့အညီ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမယ်လို့ပါ စာထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
တခါကတော့ Feng Shaofeng ဟာ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်မလုံခြုံသလို၊ မသေချာမရေရာတာမျိုး ခံစားရတယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ဖူးပါတယ်။ William ဟာ Zhao Liying အနေနဲ့ သူ့ကိုတကယ်ပဲချစ်မြတ်နိုးလို့ လက်ထပ်ခဲ့တာလား? တခြားအကြောင်းတွေကြောင့်ပဲ လက်ထပ်ခဲ့တာလား? လို့ တွေးမိကြောင်း ဖွင့်ဟပြောပြခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။
ငယ်ရွယ်နုနယ်သေးတဲ့ သားလေးတစ်ယောက်ရှိနေပေမဲ့လည်း အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တာကြောင့် Feng Shaofeng နဲ့ Zhao Liying ဟာ ဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးမှုတွေနဲ့မအားလပ်အောင်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ မိသားစုဝင်အချင်းချင်း တွေ့ဆုံချိန်လည်းနည်းပါးလာတာကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဝေးကွာလာခဲ့ရပုံပါပဲ။
တချို့သောသူတွေအတွက်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းဟာ ရုတ်တရက်ဆန်လိုက်တာဆိုပြီး တွေးနိုင်ဖွယ်ရာရှိပေမဲ့ Zhao Liying နဲ့ Feng Shaofeng တို့အတွက်ကတော့ အခုလိုနှုတ်ဆက်ခွဲခွာခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး.ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။
ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာဆိုရင် “နေ့ရက်တွေက ကြာရှည်လွန်းတယ်။ အတိတ်တွေက ကောင်းခဲ့သလို…အနာဂတ်ကပိုပြီးတောင်ကောင်းမွန်လာဖို့အတွက် မျှော်လင့်ပါတယ်။(The days are long. The past has been great. Hoping the future will be even better)” ဆိုပြီး ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
Feng Shaofeng နဲ့ Zhao Liying တို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကတော့ ၂၀၂၁ ဧပြီလမှာပဲ အခင်အမင်မပျက်ဘဲ အဆုံးသတ်ရင်း တစ်ခန်းရပ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတော့တယ်။ သားလေးနဲ့ ပတ်သက်သမျှကုန်ကျစရိတ်ကို နှစ်ယောက်မျှခံမှာဖြစ်ပြီး အနာဂတ်မှာလည်း မိတ်ဆွေတွေအဖြစ် ဆက်ဆံသွားမယ့်အကြောင်း ဖော်ပြထားတာမို့လို့ ကိုယ်စီလျှောက်လှမ်းတော့မယ့် အနာဂတ်ခရီးလမ်းတွေဟာ ဖြောင့်ဖြူးသာယာဖို့အတွက် ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။
Next ချစ်သူရည်းစားတွေဖြစ်နေကြပြီလို့ သတင်းထွက်လာခဲ့တဲ့ “A Love So Beautiful” ထဲက သရုပ်ဆောင် ၂ ယောက် »
Previous « အက်ရှင်ဇာတ်ကားအသစ်မှာ အတူတွဲပြီး မြင်​တွေ့ရမယ့် မင်းသား Kim Rae Won, Lee Jong Suk နဲ့ Cha Eun Woo